The MYAWADY Daily: November 2018
ကျန်စစ်မင်းအိမ်ရာမှ အိမ်ရာ ၂၄ လုံးကို ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရောင်းချပေးရန် စီစဉ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၌ အကောင်အထည် ဖော်လျက်ရှိသော တန်ဖိုးနည်းနှင့် တန်ဖိုးသင့် အိမ်ရာများအနက် ကျန်စစ်မင်း အိမ်ရာအတွင်းမှ အိမ်ရာ ၂၄ လုံးကို ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရောင်းချရန် စီစဉ်နေကြောင်း မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန မူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါအိမ်ရာများကို ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ယူ၍ ပြည်သူများ၏ အိမ်ရာအခန်း လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် အနေဖြင့် တည်ဆောက်ပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ တည်ဆောက်ပြီးစီးသော အိမ်ရာများကို ဆက်လက်ရောင်းချ ပေးမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ကျန်စစ်မင်း အိမ်ရာအတွင်း အိမ်ရာအခန်းများ တည်ဆောက်မှု ပြီးစီးနေ ပြီဖြစ်သည့်အတွက် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ရောင်းချပေးရန် စီစဉ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့် အခန်းများကို ဆောက်လုပ်ရေး၊အိမ်ရာနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(CHID Bank) နှင့် ချိတ်ဆက် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ယုဇနအိမ်ရာ အပိုင်း (၁) နှင့် (၂ )ရှိ ရောင်းချရန် ကျန်ရှိနေသော အခန်းများကိုလည်း CHID ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး မဲစနစ်ဖြင့် ထပ်မံရောင်းချပေးရန် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အိမ်ရာစီမံကိန်းသစ်များ ထပ်မံဖော်ဆောင်မည် မဟုတ်ဘဲ လက်ရှိ ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းများကိုသာ ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မဲစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးမှုများတွင် အိမ်ရာ ဝယ်ယူရန် မဲရရှိထားသော်လည်း လိုချင်သော အခန်းမရသဖြင့် လာဆက်သွယ်ခြင်း မရှိသည့် အခြေအနေများလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၌ တန်ဖိုးနည်းနှင့် တန်ဖိုးသင့် အိမ်ရာရောင်းချရန် ထောင်ချီ၍ ကျန်ရှိနေသေးပြီး ယင်းတို့ကိုလည်း ဆက်လက် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဒဂုံ(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရှိ ရိုးမအိမ်ရာမှ အခန်းပေါင်း ၃ဝဝဝ ကျော်နှင့် အောင်မြင့်မိုရ်အိမ်ရာမှ အခန်းများကိုလည်း ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ရောင်းချပေးရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မြန်မာပြည်တွင်း ပတ်လည်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ (ပဉ္စမ)ပွဲစဉ် တတိယနေ့ကို ပြင်ဦးလွင်မြို့ချယ်ရီလွင်တပ်မတော် ဂေါက်ကလပ်၌ ဆက်လက်ပြုလုပ်
၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မြန်မာပြည်တွင်း ပတ်လည်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ (ပဉ္စမ)ပွဲစဉ် တတိယနေ့ကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ ချယ်ရီလွင်တပ်မတော် ဂေါက်ကလပ်၌ ဆက်လက်ပြု လုပ်သည်။
ပြိုင်ပွဲ တတိယနေ့အပြီးတွင် ပညာရှင်အဆင့်ပြိုင်ပွဲ၌ ဟိန်းစည်သူက သတ်မှတ်ရိုက်ချက်ထက် ၁၅ ချက် လျှော့ရိုက်ကာ ပထမ၊ ဇော်ဇော်လတ်က သတ်မှတ်ရိုက်ချက်ထက် ၁ဝ ချက်လျှော့ရိုက်ကာ ဒုတိယ၊ ဘိုဘိုက သတ်မှတ်ရိုက်ချက်ထက် ရှစ်ချက်လျှော့ရိုက်ကာ တတိယ အဆင့် တွင်လည်းကောင်း၊ ဝါသနာရှင်အဆင့်(အမျိုးသား) ပြိုင်ပွဲတွင် ကျော်ဇင်ထွန်းက သတ်မှတ်ရိုက်ချက်ထက် လေးချက်ပိုရိုက်ကာ ပထမ၊ ဇော်ဇော်ထွန်းက သတ်မှတ်ရိုက်ချက်ထက် လေး ချက်ပိုရိုက်ကာ ဒုတိယ၊ သီဟဌေးက သတ်မှတ်ရိုက်ချက်ထက် လေးချက်ပိုရိုက်ကာ တတိယအဆင့်တွင်လည်းကောင်း၊ ဝါသနာရှင်အဆင့်(အမျိုးသမီး) ဒုတိယနေ့ပြိုင်ပွဲတွင် ဧကရီဝင်း ထွန်းက သတ်မှတ်ရိုက်ချက်ထက် ရှစ်ချက်ပိုရိုက်ကာ ပထမ၊ မေဦးခိုင်က သတ်မှတ် ရိုက်ချက် ထက်၁၃ ချက်ပိုရိုက်ကာ ဒုတိယ၊ ပြုံးပြုံးထွေးက သတ်မှတ် ရိုက်ချက်ထက် ၁၃ ချက်ပိုရိုက် ကာ တတိယတို့ဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးယှဉ်ပြိုင် ကစားလျက်ရှိသည်။
အဆိုပါ ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက်တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ချယ်ရီလွင် တပ်မတော် ဂေါက်ကလပ်၌ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
လယ်ယာမြေများ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တခြားနည်းဖြင့်အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားမှုများကို စိစစ်ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိ
ဗဟိုလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အနေဖြင့် လယ်ယာမြေများ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် တခြား နည်းဖြင့်အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားမှုများကို စိစစ်ခွင့်ပြုပေးပြီး လယ်ယာမြေများ ငှားရမ်းခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုရောင်းချခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်းနှင့် တရားမဝင် လုပ်ကိုင်မှုများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း ဗဟို လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးသက်နိုင်ဦးထံမှ သိရသည်။
ယင်းကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ တောင်သူများ အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ ပူးပေါင်း၍ လယ်ယာ မြေအား တခြားနည်းအသုံးပြုခွင့် တင်ပြလာမှု ကိစ္စရပ် များကို နိုင်ငံတော်၏ စားနပ်ရိက္ခာ မထိခိုက်စေရေးနှင့် စိုက်ပျိုးစွမ်းအားတိုး တက်လာစေရေးတို့ကို မထိခိုက်စေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
လက်ရှိတွင် (၁၆) ကြိမ်မြောက် လယ်ယာ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးပွဲသို့ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များမှ စိစစ်ထောက်ခံ တင်ပြပေးပို့လာသည့် လယ်ယာမြေများကို တခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုခွင့် လုပ်ငန်းစာတွဲ ၆၇ တွဲ၊ ယခင် ဗဟိုလယ်ယာမြေမှ ခွင့်ပြုထားသည့် မြေလွတ်၊ မြေရိုင်း၊ မြေလပ်များ ကို လယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၄ နှင့် လယ်ယာမြေနည်းဥပဒေ ၃၅၊ ၃၆ တို့အရ လျှောက်ထားသော အမှုတွဲ ၁၅ တွဲတို့နှင့်ပတ်သက်၍ လယ်ယာမြေ ပုဒ်မ ၂၈ (က) အရ မူလစိုက်ပျိုးလျက်ရှိသော သီးနှံအမျိုးအစားမှ တခြားသီးနှံအမျိုးအစားသို့ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုး ခွင့်ပြုရန် ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး စိစစ်ထောက်ခံအဖွဲ့မှ တင်ပြ ထားခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် မြေလွတ်၊ မြေရိုင်းနှင့် မြေလပ်များကို ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ယခုအချိန်မှစ၍ မြေလွတ်၊ မြေလပ် နှင့်မြေရိုင်းများကို လုပ်ကိုင်လိုသောပုဂ္ဂိုလ် နှင့် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်လည်းကောင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုမိန့် ရရှိရေးအတွက် သတ်မှတ် ချက်များ ထားရှိ ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း သိရသည်။
ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒန်နီရယ်ပက်ထရစ်ဘရန်ဒန်ချဂ်အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ဒန်နီရယ်ပက်ထရစ်ဘရန်ဒန်ချဂ်အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ အကြား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးနှင့် အတူ ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်မြင့်နွယ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ထားဝယ်မြို့နယ်ရှိ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွ့ဝင်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အိမ်ရာနေ စစ်သည်များနှင့် မိသားစုဝင်များအား တွေ့ဆုံ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ထားဝယ်မြို့နယ်ရှိ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များ၊ စစ်မှုထမ်း ဟောင်းအိမ်ရာနေ စစ်သည်များနှင့် မိသားစု င်များအား နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်း တွင် ကမ်းရိုးတန်းဒေသတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သောင်းထိုက်ရွှေနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက အဆိုပါ စစ်မှုထမ်းဟောင်းအိမ်ရာ၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ဦးစွာ တိုင်းမှူးက အမှာစကားပြောကြားပြီး စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များ၏ တင်ပြချက် များအပေါ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးကာ စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်သည်။
ထို့နောက် တိုင်းမှူးနှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် အိမ်ရာအတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပြီး စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူနိုင်ရန်အတွက် ဝက်သားပေါက်များ ပေးအပ်သည်။
ထို့ပြင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် နယ်လှည့်ဆေးကုသရေး အဖွဲ့က စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင် များနှင့် မိသားစုဝင် စုစုပေါင်း ၄၅ ဦးတို့ကို သွေးတိုးရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ အရိုး/အကြောရောဂါ၊ သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါ၊ အထွေထွေရောဂါတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ် သည့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး ကုသပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသ ရန် လိုအပ်သူများအား ထားဝယ်မြို့ရှိ တပ်မ တော်ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်ကုသနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများကို တိုင်းမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက လိုက်လံကြည့်ရှုအားပေး စကားပြောကြားပြီး လိုအပ်သည်များ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဟိုပုံးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ဟိုပုံးမြို့နယ် မိုင်းပျဉ်းကျေးရွာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများမှ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် နယ်လှည့်ဆေး ကုသရေး အဖွဲ့က အဆိုပါ ကျေးရွာရှိ မေဓာရာမ ကျောင်းတိုက်၌ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ဆေးကုသရေး အဖွဲ့က ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူ ၄၅၅ ဦး တို့ကို သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ အရိုး/အကြောရောဂါ၊ ကလေးရောဂါ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာရောဂါ၊ သားဖွား/မီးယပ်ရောဂါ၊ နား/ နှာခေါင်း/ လည်ချောင်းရောဂါ၊ အထွေထွေရောဂါတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကုသပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသရန် လိုအပ်သူများအား တောင်ကြီးမြို့ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံသို့ တက်ရောက်ကုသနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုများကို တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်လင်းအောင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက်ကြည့်ရှု အားပေးစကား ပြောကြားပြီး မေဓာရာမကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တမေဓာနန္ဒအား ဖူးမြော်၍ ဆွမ်းဆန်တော်၊ ဆီနှင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်း ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ကော့မှူးမြို့နယ်အတွင်းရှိ သံဃာတော်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကော့မှူးမြို့နယ် ဘုရားနီကျေးရွာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများမှ သံဃာတော်များ၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်း အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် နယ်လှည့်ဆေးကုသရေး အဖွဲ့က အဆိုပါ ကျေးရွာရှိ ဗောဓိမဏ္ဍိုင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ဆေးကုသရေး အဖွဲ့က သံဃာတော်ငါးပါး၊ စစ်မှုထမ်း ဟောင်းအဖွဲ့ဝင် ၅ဝ ဦးနှင့် ဒေသခံပြည်သူ ၄၅၂ ဦးတို့ကို နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါ၊ နား/နှာခေါင်း/ လည်ချောင်းရောဂါ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ ရောဂါ၊ ကလေးရောဂါ၊ သားဖွား/မီးယပ် ရောဂါ၊ အထွေထွေရောဂါတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကုသပေးခြင်းနှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါအကြောင်း ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဟောပြောခြင်းများ ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏ ဗုဒ္ဓဒေသနာတော် အကောင်းဆုံးရွတ်ဆို ပူဇော်ပြိုင်ပွဲ ဆုပေးပွဲ ပြုလုပ်
တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏ ဗုဒ္ဓဒေသနာတော် အကောင်းဆုံးရွတ်ဆို ပူဇော်ပြိုင်ပွဲ ဆုပေးပွဲကို နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းဧချမ်းဓမ္မာရုံ၌ ပြုလုပ်ရာ
ကေတုမတီမြို့သစ် မြစေတီမိုးကုတ် ဝိပဿနာကျောင်း ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တပညာစက္က အမှူးပြုသော သံဃာတော်များနှင့် သာသနာ့အနွယ်ဝင် သီလရှင်များ ကြွရောက်တော်မူကြပြီး
တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ အရာရှိ၊စစ်သည်၊ မိသားစုများ၊ ဒိုင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြိုင်ပွဲဝင်ဝတ်ရွတ် အသင်းများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာတက်ရောက်လာကြသူများက မြစေတီကျောင်း ဆရာတော်နှင့် သာသနာ့ အနွယ်ဝင် သီလရှင်များအား လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြသည်။ ထို့နောက် ဆုပေးပွဲကို
ဆက်လက်ပြုလုပ်ရာ ဆုရရှိသော အသင်းများနှင့် ဒိုင်အဖွဲ့ဝင်များအား တာဝန်ရှိသူများက ဂုဏ်ပြုဆုနှင့်ဆုများအသီးသီး ပေးအပ်သည်။
အဆိုပါ ဗုဒ္ဓဒေသနာတော် အကောင်းဆုံး ရွတ်ဆိုပူဇော်ပြိုင်ပွဲကို ပြိုင်ပွဲဝင်ဝတ်အသင်း ၁၅ သင်းဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ ယှဉ်ပြိုင်ရွတ်ဆို ပူဇော်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း
အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်၏ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော် ရွတ်ဆိုပူဇော်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မန္တလေး နန်းမြို့အတွင်း နန်းဦးဆုတောင်းပြည့် မြတ်စွာဘုရားရှိ
ရန်အောင်မြင်ဓမ္မာရုံ၌ ပြုလုပ်ရာ မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် မဟာနန္ဒီသေနာရာမတိုက် နဝမအုဌ်ကျောင်း ပဓာနနာယက မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ အဂ္ဂမဟာဂန္ထ
ဝါစကပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တဝိလာသ အမှူးပြုသော သံဃာတော်များ ကြွရောက်တော်မူကြပြီး တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်ဝတ်ရွတ် အသင်းများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ တက်ရောက်လာကြသူများက ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် တောင်ထီးလင်းတိုက် ကွန်ချာကျောင်း ပဓာနနာယက ဘဒ္ဒန္တစန္ဒာသီရိထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ကြပြီး
သံဃာတော်များထံမှ ပရိတ်တရားတော်များ နာယူကြကာ သံဃာတော်များအား လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြသည်။
အဆိုပါပဋ္ဌာန်း ဒေသနာတော်ရွတ်ဆို ပူဇော်ပြိုင်ပွဲကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် ကွပ်ကဲမှုအောက် တပ်ရင်း/တပ်ဖွဲ့များမှ ပြိုင်ပွဲဝင်ဝတ်အသင်း ၂၂ သင်းဖြင့် ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်အထိ ယှဉ်ပြိုင်ရွတ်ဆို
ပူဇော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလက္ကာမြို့ရှိ အထင်ကရနေရာများအား သွားရောက် လေ့လာ၊ မလေးရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လည် ရောက်ရှိ
မလေးရှားနိုင်င၊ံ မလက္ကာမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၁၉)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ ကြည်းတပ် ဦးစီးချုပ်များ အစည်းအဝေး (19th ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting- 19th ACAMM) နှင့် (၂၈)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနိုင်ငံ တပ်မတော်(ကြည်း)များ သေနတ်ပစ်ပြိုင်ပွဲ (28th ASEAN Armies Rifle Meet- 28th AARM) ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့သော ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်ေ ဒသစံတော်ချိန် နံနက် ၇ နာရီခွဲတွင် မလက္ကာမြို့ရှိ A' Famosa ခံတပ်ဟောင်းနှင့် St. Paul's Church ကျောင်းတို့သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံရှင်းလင်းပြသည်။
A' Famosa ခံတပ်ဟောင်းသည် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ မလက္ကာမြို့တွင် တည်ရှိကာ ပေါ်တူဂီခံတပ်ဟောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အရှေ့ဖျားဒေသတွင် ရှေးအကျဆုံးသော ဥရောပအမွေအနှစ် လက်ရာအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအနေဖြင့် ကျန်ရှိနေသည့် ခံတပ်ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မလက္ကာမြို့အား ပေါ်တူဂီတပ်များက ၁၅၁၁ ခုနှစ်မှ ၁၆၄၁ ခုနှစ်ထိသိမ်းယူခဲ့စဉ်ကတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီ ၁၈ ရက်တွင် အများပြည်သူများ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ရန် ပြတိုက်အား တရားဝင်ဖွင့်လှစ် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်ဒေသစံတော်ချိန် ၁ နာရီတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သုဝဏ္ဏဘူမိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ထွက်ခွာကြရာမလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးစိန်ဦး၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) စစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် သက်ထွန်းအောင်၊ မလေးရှားကြည်းတပ် စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ် Major General Datuk Adnan Bin Abu Bakar နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ကြသည်။
ဒုတိယတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်ဒေသစံတော်ချိန် ၁ နာရီတွင် မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကွာလာလမ်ပူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သုဝဏ္ဏဘူမိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ထွက်ခွာကြရာ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး ဦးစိန်ဦး၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) စစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် သက်ထွန်းအောင်၊ မလေးရှားကြည်းတပ် စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ် Major General Datuk Adnan Bin Abu Bakar နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်၌ ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက် ကြသည်။
ထို့နောက် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် ည၇ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ သုဝဏ္ဏဘူမိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှလေကြောင်းခရီးဖြင့် ဆက်လက် ထွက်ခွာလာရာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ည ၈ နာရီတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိကြရာ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သက်ပုံနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ စစ်သံမှူး Colonel Abdul Razak Bin Haron နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြ သတင်းရရှိသည်။
Yadanarpon Daily 30-11-2018 by TheMyawadyDaily on Scribd
Myawady Daily Newspaper 30-11-2018 by TheMyawadyDaily on Scribd
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ(အင်္ဂလိပ်စာ)မေးခွန်းပုံစံသစ် အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲနှင့် စာအုပ်များပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ ဧရာ ရပ်ကွက်ရှိ အမှတ်(၁)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း အေးမြသီတာခန်းမ၌ ကျင်းပ သည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာသင်းလွင်က အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်တွင် သင်ကြားလျက်ရှိသည့် ဆရာ၊ ဆရာမများအတွက် ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ပညာသင်နှစ် အင်္ဂလိပ်စာမေးခွန်း ပုံစံသစ်အထောက်အကူပြုစာအုပ်နှင့် ပြည်သူ့နီတိ၊ ပန်းပျိုးလက် သုတရသဆိုင်ရာ စာအုပ်များ လွှဲပြောင်းပေးအပ်လှူဒါန်းရာ တာဝန် ရှိသူများက လက်ခံရယူသည်။
ထို့နောက် ဆရာတစ်ဦးက၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ပညာသင်နှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ၌ ပြောင်းလဲ ဖော်ဆောင်သွားမည့် မေးခွန်းပုံစံသစ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည်။
ဆက်လက်၍ တက်ရောက်လာသူများအားအင်္ဂလိပ်စာမေးခွန်းပုံစံသစ်စာအုပ်နှင့် ပြည်သူ့နီတိ စာအုပ်စာစောင်များကို ထောက်ပံ့ပေးအပ်လှူဒါန်းကြောင်း သိရသည်။
တားမြစ် ပစ္စည်းများအား သိမ်းဆည်းကာ မီးရှို့ဖျက်ဆီး
ကလေး နိုဝင်ဘာ ၂၈
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးခရိုင် စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများသည် ကလေးမြို့ပေါ် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမဘေး တာဟန်းရပ်ကွက်ရှိ ကုန်မျိုးစုံ ရောင်းဝယ်ရေး ဆိုင်များသို့ ရှောင်တခင် ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခဲ့ပြီး သိမ်းဆည်းရမိသော တားမြစ်ပစ္စည်းများကို ယမန်နေ့က ခရိုင်စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန ရုံးဝင်းအတွင်း၌ မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြသည်။
ထိုသို့မီးရှို့ဖျက်ဆီးရာတွင် ခရိုင်/မြို့နယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ၊ ခရိုင်စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိ သူများက ဈေးကွက်အတွင်းမှ ပြန်လည် သိမ်းဆည်းရမိသော တားမြစ်ပစ္စည်းများနှင့် အတူ သက်တမ်းလွန်နေသော စားသောက်ကုန် ၁၇ မျိုး၊မှိုတက် အစားအစာရှစ်မျိုး၊ ထုပ်ပိုးမှု မကောင်းသည့် စားသောက်ကုန် ၁၁ မျိုးနှင့် FDA မှ စားသုံးရန်မသင့်ဟု ကြေညာထားသော စားသောက်ကုန်တစ်မျိုး စုစုပေါင်းစားသောက်ကုန် ၃၇ မျိုး၊ ၂၁၁ ထုပ်၊ ၁၆ ဘူးနှင့် ဆေးဆိုင်မှ လာရောက်အပ်နှံသော သုံးစွဲရန် မသင့်ဆေးဝါး ၁၈ မျိုးပေါင်း ၄၄ ဘူးနှင့် ၅၁ ကတ်၊ အလှကုန်ပစ္စည်း နှစ်မျိုးပေါင်း ၁ဝ ဘူး စုစုပေါင်း ကာလတန်ဖိုး ငွေကျပ် ၁ဝ၅၅၈ဝ တို့ကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးကြသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာနသည် စားသုံးသူများ အခွင့်အရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေး၊ စားသုံးသူပြည်သူ များ၏ ကုန်စည်၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘေးဥပဒ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေးအတွက် ကလေးဒေသအတွင်း စားသုံးသူပြည်သူများ လုံခြုံစိတ်ချမှု မရှိစေရေး မိတ်ဖက်ဌာန များနှင့်အတူ ခရိုင်စားသုံးသူ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်များအရ ဈေးကွက်များအတွင်းသို့ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို လစဉ်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မြိတ်ကမ်းနား၌ လှေငယ်များ စနစ်တကျကပ်နိုင်ရေး ရေဆိပ်ဆင်း တံတားနှစ်စင်း တည်ဆောက်
မြိတ် နိုဝင်ဘာ ၂၈
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်မြို့ ဒေသအတွင်းရှိ ကျွန်းရွာများမှ ခရီးသွားပြည်သူများ စက်တပ်လှေငယ်များဖြင့် စနစ်တကျ သွားလာ ဆိုက်ကပ်နိုင်ရေး၊ ပြည်သူများ ရေဆိပ်တွင် လှေပေါ်အတက်အဆင်း အဆင်ပြေချောမွေ့မှု ရှိစေရေး၊ ကမ်းနားလမ်း သာယာ လှပရေးအတွက် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရန်ပုံငွေဖြင့် ရေဆိပ်ဆင်း တံတားနှစ်စင်းကို တည်ဆောက်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရေဆိပ်ဆင်းတံတားနှစ်စင်းမှာ ထားဝယ်စုရပ် မြိတ်ကမ်းနား ရေဆိပ်ဆင်း ဆားတံတားနှင့် သာကေတရပ် မြိတ်ကမ်းနား ရေဆိပ်ဆင်း သစ်ယာဝတံတားတို့ ဖြစ်ပြီး ရန်ပုံငွေကျပ်သန်း ၁၅ဝ ဖြင့် တံတားအရှည် ပေ ၁၄ဝ၊ အကျယ်ပေ ၃ဝ၊ အမြင့် ၁၂ ပေ ရှိ ဆားတံတားကို လည်းကောင်း၊ ရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်း ၁၆ဝ ဖြင့် တံတားအရှည်ပေ ၁၆ဝ၊ အကျယ်ပေ ၃ဝ၊ အမြင့် ၁၆ ပေရှိ သစ်ယာဝ တံတားကို လည်းကောင်း တည်ဆောက်လျက် ရှိသည်။
ယင်းတံတားနှစ်စင်းကို ထူးထူးတိုးကုမ္ပဏီ က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တံတားနှစ်စင်းတွင် ယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာ၊ ကွန်ကရစ် လျှောက်လမ်းနှင့် ခရီးသည် နားနေဆောင်များ အပါအဝင် တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း လမ်းဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ ဦးသိန်းအောင် ထံမှ သိရသည်။
ဆားတံတားနှင့် သစ်ယာဝ တံတားနေရာတို့၌ ရေကျချိန်တွင် ခရီးသွားပြည်သူများ၊ ကုန်စည်သယ်ဆောင် လုပ်သားများသည် ရွှံ့ပြင်တက်၊ဆင်းပြုလုပ်ရသဖြင့် အခက်အခဲ ဖြစ်လျက်ရှိကာ တံတားနှစ်စင်း တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက အန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ သွားလာ နိုင်မည်ဖြစ်သည့် အပြင် ကုန်စည်များသယ် ဆောင်ရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန် လာမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ပုဂံရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုဇုန်ရှိ အလိုတော်ပြည့် ဘုရားပွဲ စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပမည်
ညောင်ဦး နိုဝင်ဘာ ၂၈
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်ဦးခရိုင် ပုဂံ-ညောင်ဦးမြို့ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုဇုန်ရှိ အလိုတော်ပြည့်ဘုရား ပွဲတော်ကြီးကို ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နှင့် ၂၂ ရက်တို့တွင် အလိုတော်ပြည့် ဆရာတော်ကြီးနှင့် ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များက ဦးဆောင်ကာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့ထံမှသိရသည်။
အလိုတော်ပြည့်ဘုရား ဗုဒ္ဓပူဇနိယဘုရား ပွဲတော်ကြီးအား အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှ ဆွမ်း၊ရေချမ်း၊ သစ်သီး၊ ပန်း၊ ဆီမီး ၅ဝဝဝ စီဖြင့် ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ထီးဖြူတော်ဖွင့် အခမ်းအနားဖြင့် လှူဒါန်းပူဇော်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ပင့်သံဃာ ၅၂၈ ပါးတို့အား တစ်ပါးလျှင် နဝကမ္မဝတ္ထုငွေကျပ် ၁ဝဝဝဝ ဖြင့်ငွေပဒေသာပင်များ လှူဒါန်း ပူဇော်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဘုရားပွဲတော်ရက် အတွင်း မြန်မာ့ရိုးရာအငြိမ့်၊ ဇာတ်ပွဲ၊ မီးပုံးပျံ လွှတ်တင်ပွဲများဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေသအသီးသီး၌ ပဲပုပ်စိုက်ပျိုးရန် ဧက ၁ဝဝဝဝ အတွက် မျိုးပေးအပ်ထား
မြန်မာနိုင်ငံပဲပုပ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူ အများပိုင်ကုမ္ပဏီမှ ယခုနှစ်အတွင်း ဒေသ အသီးသီး၌ ပဲပုပ်ဧက ၁ဝဝဝဝ စိုက်ပျိုး ရန် ပဲပုပ်မျိုးများ ပေးအပ်ထားကြောင်း ယင်းကုမ္ပဏီ Chief Director ဦးဝင်းဇော်အေး ထံမှ သိရသည်။
ပဲပုပ်စိုက်ပျိုးမည့် ဧက ၁ဝဝဝဝ အတွက် မျိုးပေးအပ်ခြင်းအပြင် ပဲပုပ်ထွက်ရှိချိန်တွင် ပိဿာချိန် ၂ဝ လျှင် ငွေကျပ် ၁၈ဝဝဝ ဖြင့် ပြန်လည်ဝယ်ယူရန်လည်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
''တစ်နိုင်ငံလုံး စာချုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ မျိုးအနေနဲ့ကတော့ ဒီနှစ်အတွက် ဧက ၁ဝဝဝဝ စာလောက်ပဲပေးနိုင်သေးတယ်။အကုန်လုံးကို လိုက်မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ပဲပုပ်မျိုးက မတ်ပဲလိုမဟုတ်ဘူး။ နည်းပညာပါတယ်။တွေ့တဲ့မျိုးကို စိုက်လို့မရဘူး။ သူ့ဒေသ ရာသီနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ မျိုးကိုပဲ ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်'' ဟု ဦးဝင်းဇော်အေး ကပြောသည်။
ထို့ပြင် တောင်သူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းကာ အများပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် စတင် လုပ်ဆောင်နေ သည့်အတွက် လတ်တလောတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ လိုအပ်နေသဖြင့် ဧက ၁ဝဝဝဝစာသာ ပေးနိုင်သေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လတ်တလောတွင် ပဲပုပ်ကို နေပြည်တော်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး (အရှေ့ပိုင်း)၊ (အနောက်ပိုင်း)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့၌ စိုက်ပျိုးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်း၌ ပဲပုပ်ကို ပဲပြားအစို၊ ပဲနို့လုပ်ငန်း၊ ပဲပုပ်ဆီအဖြစ် ထုတ်လုပ်သည့် ဆီစက်လုပ်ငန်း၊ပဲပုပ်မှ ဆီထုတ်ပြီးပါက ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ထွက်ရှိလာသည့် ပဲပုပ်ဖတ်ကို တိရစ္ဆာန်အစာအဖြစ် အသုံးပြုနေသောကြောင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်သို့ တင်ပို့ရန် မလိုအပ်ကြောင်း၊ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ တင်သွင်းလာသည့် ပဲပုပ်များကို ကြက်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငါးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိက အသုံးပြုကြောင်း၊ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက် ပြည့်မီစေရန် တိုးချဲ့ စိုက်ပျိုးရာတွင် ငါးနှစ်မှ ၁ဝ နှစ်အထိ အချိန်ယူ၍ ကြိုးစားရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လတ်တလောတွင် ပြည်တွင်း၌ တန်ချိန် ခြောက်သောင်း ဝန်းကျင်သာ ထုတ်လုပ်နိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။
ငဝန်မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့် အင်္ဂပူ-ညောင်ကျိုးဆက်သွယ်ရေး လမ်းပြတ်တောက်နေသဖြင့် ကမ်းထိန်းလုပ်ငန်းများ အမြန်ဆောင်ရွက်ပေးစေလို
အင်္ဂပူ နိုဝင်ဘာ ၂၈
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အင်္ဂပူမြို့နယ် နောက်မီးကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂပူ-ညောင်ကျိုး ဆက်သွယ် ရေးလမ်းပိုင်း၌ ငဝန်မြစ်ကမ်းပါး ပြိုကျမှုကြောင့် အင်္ဂပူ-ညောင်ကျိုးလမ်း ပြတ်တောက်နေ သဖြင့် တာဝန်ရှိသူများက ကမ်းထိန်းလုပ်ငန်းများကို အမြန်ဆောင်ရွက် ပေးစေလိုကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
''ကျွန်တော်တို့ ဒေသခံတွေက စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစတာတွေ အကုန်လုံးအတွက် ဒီလမ်းကိုပဲ အားကိုးပြီး သွားလာနေရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင် အင်္ဂပူ၊ ဟင်္သာတ ဆေးရုံတွေ ကို အားကိုးနေရတဲ့ အချိန်တွေမှာ သွားလာဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ အရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ရပ်တန့်နေပါတယ်။ ဒီလမ်းကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု မရှိဘူးဆိုရင် မိုးတွင်း မြစ်ရေကြီးတဲ့အခါ အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ လယ်ဧက ၈ဝဝဝ ကျော် ထိခိုက် ပျက်စီး နိုင်ပါတယ်။ ဒီလမ်းက မြစ်ရေကြီးတဲ့ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးတဲ့တာပါ။ ကြို့ကုန်း၊ သဖန်းပင် ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ အလယ်တန်း ကျောင်းသားတွေ၊ ဝက်လဟာ အုပ်စုမှာရှိတဲ့ အထက်တန်း ကျောင်းသားတွေက ညောင်ကျိုးကို သွားတက်နေရတဲ့ အတွက် အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ဒီလမ်းကို အမြန်ဆုံးပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပေးပါလို့ ကျွန်တော်တို့ ဒေသခံတွေ အနေနဲ့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်''ဟု ကြို့ကုန်းကျေးရွာ နေသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါ လမ်းပိုင်းတွင် ကမ်းပြိုမှုများမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာသဖြင့် ကမ်းပါးပြိုမှု အချိန်မီ ထိန်းသိမ်း ပေးနိုင်ရေးနှင့် ဒေသတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရေး တာဝန်ရှိသူတို့က အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေကြောင်း သိရသည်
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ပထမအကြိမ် ဘင်းမ်စတက်နိုင်ငံများမှ တရားစီရင်ရေး အကြီးအကဲများ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနေ့ အခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ပြန် လည်ရောက်ရှိ
ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နယူးဒေလီမြို့၌ နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ''ပထမအကြိမ် ဘင်းမ်စတက်နိုင်ငံများမှ တရားစီရင်ရေး အကြီးအကဲများ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲ'' «First Round Table of the Head of Judiciary of BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) Countries»နှင့် နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင်ကျင်းပသည့် ''အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနေ့ အခမ်းအနား'' (Constitution Day Celebrations)တို့သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယမန်နေ့ ညပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။
ပည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်သည် ဘင်းမ်စတက် နိုင်ငံများမှ တရားစီရင်ရေး အကြီးအကဲများ ၏စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်ကြသည့် ဘင်္ဂလား ဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နီပေါနိုင်ငံ၊ ဘူတန်နိုင်ငံနှင့် အိမ်ရှင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှ တရားသူကြီးချုပ်များ၊ ဒုတိယတရားသူကြီးချုပ်၊ တရားသူကြီးများနှင့် အတူ နည်းပညာနှင့် တရားမျှတမှု လက်လှမ်းမီရေး၊ အကြမ်းဖက်မှုခင်းများအား စစ်ဆေး စီရင်ခြင်း၊ နိုင်ငံဖြတ်ကျော် မှုခင်းများ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ကုန်ကူးမှု၊ လူကုန်ကူးမှုများနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အတွေ့အကြုံ များကို ဆွေးနွေးဖလှယ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တရားရုံးချုပ်က ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် (၆၉)ကြိမ်မြောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနေ့ အခမ်းအနားသို့လည်း တက် ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့ တောင်ပြိုလက်ဝဲ ပြန်လည်လက်ခံရေး စခန်းသို့ သွားရောက် သတင်းရယူ
မောင်တော နိုဝင်ဘာ ၂၈
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့၌ ရောက်ရှိနေသော ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းဌာနရှစ်ခုမှ သတင်းသမားများသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် တောင်ပြိုလက်ဝဲပြန်လည် လက်ခံရေးစခန်းသို့ ရောက်ရှိကြပြီး စခန်းအတွင်းပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု သတင်းရယူကြသည်။
သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့သည် စတင်ဝင်ရောက်မည့် နေရာဖြစ်သည့် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေး တံတား၊ ကနဦး စစ်ဆေးမည့်နေရာ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်ခဲ့ဖူးခြင်း ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးမည့် နေရာ၊ ဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းတင်မည့်နေရာ၊ အိမ်ထောင်စု စာရင်း ပြုလုပ်ပေးမည့်နေရာ၊ Biometric မှတ်တမ်းတင်မည့် နေရာ၊National Verification ကတ်ပြုလုပ်ပေးမည့် နေရာ၊ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမည့်နေရာ၊ ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ပေးအပ် မည့်နေရာနှင့် ဝင်ရောက်လာသူများ နေထိုင်ရန် တည်းခိုဆောင်များ ဆောက်လုပ်ထားမှုတို့ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု သတင်းရယူကြသည်။
ထို့နောက် သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့သည် တောင်ပြိုလက်ဝဲ ပြန်လည်လက်ခံရေး စခန်း တာဝန်ခံ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးထွန်း၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန့်စင်တို့နှင့် တွေ့ဆုံ၍ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်နှင့် ပြန်လည်လက်ခံရေး၊ ပြန်လည် နေရာချထားရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ထားမှု အခြေအနေတို့ကို မေးမြန်းသတင်း ရယူကြသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်မျဉ်းအနီး၌ နေထိုင်နေကြသည့် နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား တွေ့ဆုံကာ လက်ရှိ နေထိုင်စားသောက်မှု အခြေအနေ၊ နေထိုင်သည့် လူဦးရေ၊ ကူညီထောက်ပံ့မှု အခြေအနေ၊ NV ကတ်ပြုလုပ်မည့်အပေါ် ၎င်းတို့၏ သဘောထားအမြင်၊ နေရပ်စွန့်ခွာခြင်းနှင့် နေရပ်သို့ ပြန်လည်မဝင်ရောက်ရသည့် အကြောင်းရင်းတို့ကို မေးမြန်းသတင်း ရယူကြသည်။
ယင်းနောက် သတင်းမီဒီယာ အဖွဲ့သည် မင်းကြီးကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိပြီး နေအိမ်များ ဆောက်လုပ်ပေးထားမှု အခြေအနေကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာကာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ကျေးရွာနေပြည်သူများ၏ နေထိုင် စားသောက်မှုနှင့် ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှု အခြေအနေ၊ ကျေးရွာရှိလူဦးရေနှင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များကို မေးမြန်းသတင်း ရယူကြသည်။
သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့သည် ညပိုင်းတွင် စစ်တွေမြို့မှတစ်ဆင့် လေကြောင်းခရီးဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိကြကြောင်း သိရသည်။
လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ခန့်အပ် တာဝန်ပေး
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်အမှတ်၊ ၄၁/၂ဝ၁၈ ၁၃၈ဝ ပြည့်နှစ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် ၆ ရက်
(၂ဝ၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်) လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခြင်
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး သူရမျိုးတင်ကို စစ်ဘက်မူလ တာဝန်များ ပြန်လည် ထမ်းဆောင်စေပြီး ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၆၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ်(၂)၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ ပုဒ်မခွဲ(င)နှင့် ပုဒ်မခွဲ(စ)၊ ပုဒ်မ ၂၆၄၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)၊ ပုဒ်မ ၈၂၊ ပုဒ်မခွဲ(ဂ)နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂)၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)၊ ပုဒ်မခွဲ(စ)နှင့် ပုဒ်မခွဲ(ဆ)၊ ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)တို့ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဗိုလ်မှူးကြီး နေလင်းထွန်းကို ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလိုက်သည်။
(ပုံ)ဝင်းမြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
မှော်ဘီမြို့နယ် မြောင်းတကာ စံပြကျေးရွာရှိ ပုညကာရီဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း၌ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ် မြောင်းတကာစံပြကျေးရွာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများရှိ သံဃာတော်များ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် နယ်လှည့်ဆေးကုသရေး အဖွဲ့က အဆိုပါကျေးရွာရှိ ပုညကာရီဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း၌ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့က သံဃာတော် အပါး ၂ဝ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂၂ဝ ဦးနှင့် ဒေသခံပြည်သူ ၆ဝ ဦးတို့ကို အရိုးရောဂါ၊ သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါ၊ နား/။နှာခေါင်း/လည်ချောင်းရောဂါ၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာ ရောဂါ၊ ကလေးရောဂါ၊ အထွေထွေရောဂါတို့နှင့် ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး ကုသပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဆောင်းရာသီတွင် ဖြစ်ပွားတတ်သော ရောဂါများ အကြောင်း ကျန်းမာရေး အသိပညာပေး ဟောပြောဆွေးနွေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ထို့ပြင် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့က ကျောင်းဝင်းအတွင်း ခြင်ခိုအောင်းနိုင်သော နေရာများအား ခြင်ဆေးဖျန်းပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ရပ်စောက်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများမှ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများအား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ရပ်စောက်မြို့နယ် လွယ်ဆင်ကျေးရွာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ကျေးရွာများမှ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါကျေးရွာရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် နယ်လှည့် ဆေးကုသရေးအဖွဲ့က ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်ပေးရာတွင် ဆေးကုသရေး အဖွဲ့က ဒေသခံပြည်သူ ၉၂ ဦးကို ခွဲစိတ်ကုသမှုဆိုင်ရာရောဂါ၊ သားဖွား/မီးယပ်ရောဂါ၊ ကလေးရောဂါ၊ နား/နှာခေါင်း/ လည်ချောင်းရောဂါ၊ အရိုး/အကြောရောဂါ၊ မျက်စိရောဂါ၊ သွားနှင့်ခံတွင်းရောဂါ၊ အထွေထွေ ရောဂါတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးကုသပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရန် လိုအပ်သူများအား ရပ်စောက်မြို့ရှိ တပ်မတော်ဆေးရုံသို့ တက်ရောက် ကုသနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကြူကုတ်(ပန်ဆိုင်း)မြို့နယ်၊ လွယ်အင်ကျေးရွာ အနီးရှိ အလှူခံမဏ္ဍပ်၌ ဒေသန္တရ လက်လုပ်ရီမုမိုင်း တစ်လုံးတွေ့ရှိ
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကြူကုတ်(ပန်ဆိုင်း)မြို့နယ် ကျိန်ယမ်းကျေးရွာအုပ်စု လွယ်အင်ကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက် မီတာ ၁ဝဝ ခန့်အကွာ၊ လွယ်အင်-ဟိုနောင်သွား ကားလမ်းအနီး၌ ဇရပ်ဆောက်လုပ်ရန် အလှူငွေကောက် ခံလျက် ရှိသော အလှူခံမဏ္ဍပ်၌ ဒေသန္တရလက်လုပ် ရီမုမိုင်းတစ်လုံး တွေ့ရှိကြောင်း သိရှိရသဖြင့် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့်တွင် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သွားရောက်စစ်ဆေးရာ အလှူခံမဏ္ဍပ်အတွင်းရှိ အလှူခံပုံးတင်ထားသော စားပွဲခုံအောက်၌ အဝါရောင်ပီနံအိတ် အတွင်းမှ ကတ်ထူစက္ကူဖြင့် ထုပ်ထားသည့် ယမ်းပျော့ နှစ်ထုပ်၊ ၁၂ ဗို့ ဘက်ထရီ(အသေး) တစ်လုံး၊ ဖျူ့(စ်)နှစ်ချောင်း၊ ဆားကစ်ပြား တစ်ခုနှင့် အနက်ရောင်အိတ်ဖြင့် ထုပ်ထားသည့် ကျောက်စရစ်ခဲ တစ်ထုပ်တို့အား တွေ့ရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
အဆိုပါဒေသန္တရ လက်လုပ်ရီမုမိုင်းအား နယ်မြေခံစစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာတပ်မှ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ အများပြည်သူ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှု မရှိစေရေး သက်မဲ့ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ပအိုဝ်း ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့(PNO) အသွင်ပြောင်း ပြည်သူ့စစ် ဌာနေ အဖွဲ့နာယက ဦးအောင်ခမ်းထီအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ၊ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေး
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ပအိုဝ်းငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ (PNO) အသွင်ပြောင်း ပြည်သူ့စစ်ဌာနေ အဖွဲ့နာယက ဦးအောင်ခမ်းထီအား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး နယ်မြေဒေသ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာများအား ဆွေးနွေးသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦးနှင့် တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး ပအိုဝ်း ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့(PNO) အသွင်ပြောင်း ပြည်သူ့စစ် ဌာနေ အဖွဲ့နာယကနှင့်အတူ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးခွန်မြင့်အောင်နှင့် ပအိုဝ်းငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့(PNO) အဖွဲ့၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ယခုအခါတွင် ပအိုဝ်းဒေသသည် တည်ငြိမ်အေးချမ်း လျက်ရှိပြီး ပအိုဝ်းငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့(PNO)၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအား ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့အတူ နယ်မြေတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး သာမက ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကို အခြေခံသော စီးပွားရေးနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ထွန်း အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင် ရွက်နိုင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားနှင့် ရေကောင်းရေသန့် ရရှိရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း၊ ဒေသတွင်းရှိ မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ အတန်းပညာ မြင့်မားသော ပညာတတ်များ ထွက်ပေါ်လာပြီး မိမိတို့နယ်မြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အတွက် ဆောင်ရွက် ကြစေလိုကြောင်း၊ လူငယ်လူရွယ်များ ပညာကောင်းမွန်စွာ သင်ကြားနိုင်စေရန် အတွက် ဒေသအသီးသီးတွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများ ရှိထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် အတွက် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်ပြီး ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အရက်၊ ဆေးလိပ်၊ ကွမ်းစားသုံးခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ရရှိနေသော ပအိုဝ်းဒေသကို စံနမူ နာပြ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြစေလိုကြောင်း၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ရာတွင်လည်း တပ်မတော် အနေဖြင့် တတ်နိုင်သည့်ဘက်မှ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအခါ ပြည်သူ များမှ ရွေးချယ်သည့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်၌ လျှောက်လှမ်းလျက် ရှိရာတွင် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အရေးပါသော ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ဆောင်ရွက် ရာတွင်လည်း တည်ရှိပြီး ပြည်ထောင်စုကြီးအတွင်း စုပေါင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသား အားလုံးက မြန်မာစိတ်ဓာတ်မွေး၍ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်၊ ညီရင်းအစ်ကိုသဖွယ် စိတ်ဓာတ်၊ မိသားစုသဖွယ် စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားကြရန်လိုကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား အားလုံး အုပ်ချုပ်ရေး အပါအ၀င် နယ်ပယ်ပေါင်းစုံ၌ အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များအဖြစ် ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုနိုင်ကြရန်၊ မိမိနေရာ ၊ မိမိဒေသအတွက် တာဝန် ထမ်းဆောင် နိုင်ကြစေလိုကြောင်း၊ အခြားနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပြိုင်ဘက်လို ကြိုးစားအားထုတ် ကြရမည် ဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့ နိုင်ငံတွင်း နေထိုင်မှုအတွက် တစ်မိသားစုစိတ်ဖြင့် နေထိုင်ကြရန် လိုကြောင်း ပြောကြား သည်။
ထို့နောက် ပအိုဝ်းငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့(PNO) နာယကက ပအိုဝ်းဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် နိုင်ငံတော်နှင့် တပ်မတော်မှ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးနေမှုများအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့ တိုင်းရင်းသား အားလုံးသည် တစ်မြေတည်းနေ၊ တစ်ရေတည်းသောက်၊ တစ်လေတည်းရှုရှိုက် နေကြရသောကြောင့် အားလုံး တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း စည်းလုံး ညီညွတ်စွာဖြင့် နေထိုင်ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားများသည် နိုင်ငံအနှံ့ အပြားတွင် များစွာနေထိုင် ကြသည်လည်းဖြစ်၍ တိုင်းရင်းသား အားလုံးအပေါ် လူမျိုးစွဲမထားဘဲ ညီအစ်ကိုမောင်နှမ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် နေထိုင်လျက်ရှိကြကြောင်း ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ပအိုဝ်းငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့ (PNO) အသွင်ပြောင်း ပြည်သူ့စစ် နာယကတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြသည်။ ထို့နောက် တပ် မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ပအိုဝ်း ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့(PNO) အသွင်ပြောင်း ပြည်သူ့စစ် ဌာနေအဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ပြီး အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် TELECOM INTERNATIONAL MYANMAR CO.,LTD.(MYTEL) အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်အား လက်ခံ တွေ့ဆုံ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် Mr. Nguyen Thanh Nam အား ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစောနှင့် မြန်မာ စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန့်ဆွေ တို့တက်ရောက် ကြပြီး Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်နှင့်အတူ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် တိုးတက်မှု အခြေအနေများ၊ ပြည်သူများအား ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနေမှု အခြေအနေများ၊ စာသင်ကျောင်းများတွင် အင်တာနက်လိုင်းများ တပ်ဆင်ပေးနေမှု အခြေ အနေများ၊ ကျေးလက် ဒေသများအထိ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများအား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲ အပြီးတွင် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် Telecom International MYANMAR Co.,Ltd.(Mytel) အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်တို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ပြီး စုပေါင်း ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။